Announcement; – Ministry of Health
Company Registration in MOHS
Download Tender Form (2021-2022 mini)
Download Tender Form- DPH
Download Tender Form (DMS)
cptd.10.dms (2021-2022)mini December 3, 2021
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခု အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခု မတ်လ အထိ (၆)လအတွင်း ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ဆေးရုံသုံး Ambulance များအား တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ Website: etender-mohs.com တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရူရမည်ဖြစ်ပြီး […]
Covid 19 RDT test kit ဈေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက်အား ကြော်ငြာခြင်း December 1, 2021
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ cutd 7. dph.21-22 တင်ဒါမှ (၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ တွင် တင်ဒါပိတ်သိမ်းသည့် Covid 19 RDT test kit ဈေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက်အား ကြော်ငြာခြင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ cutd 7. dph.21-22 […]
Email လိပ်စာများပြောင်းလဲထားရှိပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း November 30, 2021
ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသည့် Tender & Quotation များအတွက် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပေးပို့ရမည့် mail address ပြောင်းလဲခြင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်သူ့ဆေးရုံများအတွက် လိုအပ် သော ဆေးရုံသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၏ e-government လုပ်ငန်း များတွင် […]
cutd.9.press.dph 21-22 November 28, 2021
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲမှ ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအတွက် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအပ်နှံမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏cptd.4.dph.21-22 email ထပ်မံပေးပို့ရန်ကြေညာခြင်း November 24, 2021
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏cptd.4.dph.21-22 email ထပ်မံပေးပို့ရန်ကြေညာခြင်း cptd.4.dph.21-22 ၏ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်အား (၂၅–၁၁–၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၂:၀၀)နာရီ သို့ ရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ MOHS Mail Server များ ခေတ္တရပ်နားထားပါသောကြောင့် MOHS WEBSITE: etender-mohs.com တွင် […]
Covid 19 Antigen Rapid Diagnostic Test အတွက် တင်ဒါပိတ်သိမ်းချိန် ပြောင်းလဲခြင်း November 23, 2021
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ cutd 1&2. dph.21-22 ဈေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက်အား ကြော်ငြာခြင်း November 23, 2021
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ cutd.1.dph.21-22 နှင့် cutd.2.dph.21-22 တွင် တင်ဒါခေါ်ယူထားသော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား (၂၅-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် Zoom meeting ဖြင့် ဈေးနှုန်း ဖွင့်ဖောက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါ၍ Envelop A (Price) Excel file […]
COVID-19 ကုသရေးဆေးဝါးများ၊ Reagent နှင့် Consumable များ၊ Blood Safety ပစ္စည်းများ အား တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း November 19, 2021
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခု အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခု မတ်လ အထိ (၆)လအတွင်း ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ COVID Medical Center များနှင့် ပြည်သူ့ ဆေးရုံများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် COVID-19 ကုသရေးဆေးဝါးများ၊ Reagent နှင့် […]
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ cptd.4.21-22 တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်အား ရက်တိုးမြှင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း November 19, 2021
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ cptd.4.21-22 တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်အား ရက်တိုးမြှင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း Mail Server များကို (၂၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ခေတ္တရပ်နားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် MOHS WEBSITE: etender-mohs.com တွင်ကြေညာခဲ့သည့် cptd.4.21-22 တင်ဒါ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်အား (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) […]
ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ Websit ဖြစ်သည့် doms.gov.mm ကို Maintenance ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် Quotation ခေါ်ယူခြင် November 16, 2021
ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် doms.gov.mm ကို Maintenance ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် အဆိုပြု စျေးနူန်းလွှာ Quotation ခေါ်ယူခြင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခု၊ မတ်လအထိ (၆)လအတွင်း […]
ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်များအား ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း November 16, 2021
ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်များအား ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း Mail Server များကို (၂၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ခေတ္တရပ်နားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် MOHS WEBSITE: etender-mohs.com တွင် ကြေညာခဲ့သည့် အောက်ဖော်ပြပါ တင်ဒါ/ Quotation များ၏ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်များအားအောက်ဖော်ပြပါဇယားအတိုင်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါကြောင်း […]
COVID-19 ရောဂါကုသရေးလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်သော Tab Molnupiravir အား ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အဆိုပြု ဈေးနှုန်းလွှာ Quotation ခေါ်ယူခြင်း November 15, 2021
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကုသရေးဦးစီးဌာန COVID-19 ရောဂါကုသရေးလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်သော Tab Molnupiravir အား ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အဆိုပြု ဈေးနှုန်းလွှာ Quotation ခေါ်ယူခြင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ […]
တင်ဒါအမှတ် – cutd.7.COVID.21-22 တင်ဒါအတွက် နောက်ဆက်တွဲ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း နောက်ဆက်တွဲ(က) November 15, 2021
တင်ဒါအမှတ် – cutd.7.COVID.21-22 တင်ဒါအတွက် နောက်ဆက်တွဲ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း နောက်ဆက်တွဲ(က) Covid Items တင်ဒါဖောင်ကြေး-(၅၀,၀၀၀)ကျပ် Consu21.17 to Consu 21.23 No. Commodity AU Tender Code […]
cutd.7.COVID.21-22 November 11, 2021
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲမှ Covid 19 ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အတွက် လိုအပ်သော တစ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ တင်ဒါအမှတ် – cutd.7.COVID.21-22 တင်ဒါစတင်သည့်ရက် – ၁၁–၁၁–၂၀၂၁ […]
အသိပေးကြေငြာခြင်း November 10, 2021
Cutd5 တင်ဒါ ဈေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်းကို (၁၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီတွင် Zoom Meetingဖြင့်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
cptd.6.dms (2020-2021)mini November 5, 2021
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခု အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခု မတ်လ အထိ (၆)လအတွင်း ကုသရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်၊ E-gov လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းနှင့် Software များအား တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။ တင်ဒါအမှတ် -cptd.6.dms (2020-2021)mini တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက် […]
Specification ပြင်ဆင်‌ကြောင်း အသိပေးခြင်း October 28, 2021
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကုသရေးဦးစီးဌာန cptd.3.dms(2021-2022) mini တင်ဒါတွင် Group Anaesthesia II မှ Operation Table ၏ Specification ပြင်ဆင်‌ကြောင်း အသိပေးခြင်း ၁။ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ cptd.3.dms(2021-2022) mini ဖြင့် […]
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ တင်ဒါကြော်ငြာပြင်ဆင်ချက်၊ပြင်ဆင်ချက်(၂) October 28, 2021
ပြင်ဆင်ချက်(၂) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါခေါ်ယူထားသော Cutd1,2,4,5 တို့၏ နမူနာပစ္စည်းနောက်ဆုံးပေးသွင်းရမည့်ရက်တွင် (—၁၀–၂၀၂၂) ရက်နေ့ဟုမှားယွင်းဖော်ပြထားပါသဖြင့် (—၁၀–၂၀၂၁)ရက်နေ့ဟု ပြင်ဆင် မှတ်သားပေးပါရန် အသိပေးကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ တင်ဒါကြော်ငြာပြင်ဆင်ချက်၊ ပြင်ဆင်ချက်(၁) October 28, 2021
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ တင်ဒါကြော်ငြာပြင်ဆင်ချက် ပြင်ဆင်ချက်(၁) Tender- cutd.2.dph 2021-2022 Equine Rabies Immunoglobulin (ERIG)၏ specificationအား အောက်ပါအတိုင်းဖြည့်စွက်ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ “minimum 200 IU/ml of immunoglobulin fragments” for RIG […]
cptd.4.dph(21-22) October 25, 2021
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲမှ ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးဌာနသုံးပစ္စည်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအမှတ် – cptd.4.dph.21-22 တင်ဒါစတင်သည့်ရက် – ၂၅–၁၀–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာစတင်လက်ခံမည့်ရက် – ၈-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်နှင့်အချိန်- ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ […]
cutd.5.dph(21-22) October 25, 2021
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန၊ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲမှ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအကြိုအဆင့် HPV အခမဲ့စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော Consumable items (6) နှင့် Disposable Vaginal Speculum များဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအမှတ် – cutd.5.dph.21-22 တင်ဒါစတင်သည့်ရက် – ၂၅–၁၀–၂၀၂၁ ရက်နေ့ […]
cptd.3.dms(2021-22 mini) October 18, 2021
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခု အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခု မတ်လ အထိ (၆)လအတွင်း ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် ဆေးရုံသုံးစက်ပစ္စည်း (၁၈၆) မျိုးအား အုပ်စု (၂၃) ခုခွဲပြီး တင်ဒါခေါ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။ […]
cutd.2.dph(21-22) October 15, 2021
တင်ဒါအမှတ် – cutd.2.dph.21-22 တင်ဒါစတင်သည့်ရက် – ၁၅–၁၀–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာစတင်လက်ခံမည့်ရက် – ၂၉–၁၀–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်နှင့်အချိန်– ၁၂–၁၁–၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၂:၀၀) နာရီ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန် – Website တွင် […]
cutd.1.dph.21-22 October 15, 2021
တင်ဒါအမှတ် – cutd.1.dph.21-22 တင်ဒါစတင်သည့်ရက် – ၁၅–၁၀–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာစတင်လက်ခံမည့်ရက် – ၂၉-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်နှင့်အချိန် – ၁၂–၁၁–၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန် […]
cutd.2.dms(2020-2021) ၏ နောက်ဆက်တွဲ(၄) တင်ဒါအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း September 23, 2021
(၂၀၂၀-၂၀၂၁)ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်ရန်ပုံငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူထားသော e-tender အမှတ်စဉ် cutd.2.dms(2020-2021) နောက်ဆက်တွဲ (၄) တင်ဒါအောင်စာရင်း
cutd.7 Press တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း August 19, 2021
cutd.11 တင်ဒါအောင်စာရင်း August 16, 2021
cutd.1. tender အောင်စာရင်း နောက်ဆက်တွဲ August 16, 2021
FaceShield တင်ဒါအောင်စာရင်း August 16, 2021
cptd.12 တင်ဒါအောင်စာရင်း August 16, 2021
Username: User email: